ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ အောင်မြင်မှုများကို ပြန်ကြည့်ရန်
FBS ဌာနချုပ်များတွင် ခရစ္စမတ်မီးရောင်စုံများနှင့်အတူ၊ ၂၀၁၈တစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော်တို့ဝေမျှခဲ့သည့် တိုးတက်နှုန်းကို ပြသခဲ့သည့်အမြင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ဤစစ်မှန်သောတစ်နှစ်တာလုံးတွင် စိတ်ချယုံကြည်မှု၊ ဖောက်သည်-အာရုံစိုက်မှုနှင့် "ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်သည်"ဆိုသည့် သဘောထားကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီတန်ဖိုးများမှာ နှစ်မြှုပ်ထားပါသည်။ ပါတနာများနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့၏ပူးပေါင်းအားထုတ်မှုသည် နှစ်အဆုံးတွင် အံ့အားသင့်ဖွယ်စာရင်းအင်းကို ရစေသည်။
ကမ္ဘာအဝှမ်း ၁၉၇နိုင်ငံမှ ရောင်းဝယ်သူ ၁၁သန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ပါသည်။
ရည်မှန်းချက်ကြီးသော ငွေကြေးပန်းတိုင်ကို ထိမိရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီး၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ရန် အလွန်တက်ကြွလျှက်ရှိပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်၊ FBSသည် ဘက်ပေါင်းစုံအတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရင်းမြစ်မျိုးစုံ၊ ဆိုဒ်ရှိ သင်ထောက်ကူများ၊ သတင်းများ၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များမှစ လှုပ်ရှားမှုအရှိဆုံးဒေသများတွင် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အပတ်စဉ် အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးများအဆုံး စီစဉ်ပေးထားသည်။
ယခုနှစ်တွင်FBS CopyTrade ဆော့ဖ်ဝဲကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အောင်မြင်သော ရောင်းဝယ်သူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကူးယူခွင့်ရစေပြီး၊ ရောင်းဝယ်သူများအား - သူတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုကိုမျှဝေရန်နှင့် ကူးယူခဲ့သည့် ပုံစံများအတွက် ကော်မရှင်ရစေမည့် လူမှုအရောင်းအဝယ် ပလက်ဖောင်း။
၃၇၀,၀၀၀သော ပါတနာများသည် ယခုနှစ်တွင် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အား တောက်ပစေခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ လေးစားမှုကို ပြသရန်နှင့် စင်္ကာပူ၊ Sentosaရှိ FBS ခေါင်းဆောင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ဤထူးခြားသည့် ပညာရှင်များအားတွေ့ဆုံရန် ဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျောချမ်းဖွယ်လေထုနှင့် လေထဲတွင် တက်ကြွနေသည့် အဖွဲ့၏စိတ်ဓာတ်များကို ဇိမ်ခံရွက်လှေသဘောကုန်းပတ်တွင် ပျော်ရွှင်ခံစားခဲ့ကြသည်။ ပွဲမှ ကျွန်တော်တို့အား စစ်မှန်သောရှုထောင့်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သိုက တူညီသည့်လားရာကို ကြည့်ရှုကြသူများထံမှ လှုံ့ဆော်နေသည့် တုန့်ပြန်ချက်များပေးခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်လို၍ သူတို့အားပါတနာ အပိုဆု - ဖောက်သည်များ၏ ထည့်သွင်းငွေနှင့် သူတို့ရောင်းဝယ်ခဲ့သည့် lotများနှင့်အတူ $၃,၀၀၀အထိ အပိုဆောင်းဝင်ငွေရရန် တကယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုစီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဈေးကွက်မှ တောင်းဆိုထားသည့် အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး၊ အချိန်နဲ့တပြေးညီဝန်ဆောင်မှုများမပါဘဲ မည်သည့်တိုးတက်မှုမှမဖြစ်နိုင်ဟု ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါသည်။
[USD/ZAR နှင့် USD/BRL] ငွေကြေးအတွဲများအား ကျွန်တော်တို့ အရောင်းအဝယ်ပစ္စည်းများသို့ ပေါင်းထည့်ခဲ့ပြီး၊ [တရုတ်နှင့် ဘရာဇီးအတွက် ငွေပေးချေစနစ်အသစ်များ] စတင်ခဲ့ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလအား ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်တစ်ခုဖြင့် မှတ်သားထားသည်။ ရောင်းဝယ်သူများသည် ယခုအခါ အမေရိကစတော့အိတ်ချိန်း ဈေးကွက်မှ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၀၀ဝန်းကျင်၏ စတော့ရှယ်ယာများတွင် မြှုပ်နှံနိုင်ပါပြီ။
ထို့အပြင် တောင်းဆိုအားမြင့်တက်မှုကြောင့်၊ မိုက်ခရိုအကောင့်များ - လူသစ်များအတွက် အလုံခြုံဆုံးအကောင့်အမျိုးအစားကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာကြီးသည် ပိုကောင်းမွန်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသောအခါ၊ အိပ်မက်မက်ရန် ပိုလွယ်ကူပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် တိုင်းတာသည့် အောင်မြင်မှုအား လူအများ သူတို့အိပ်မက် မမျှော်လင့်ဘဲပြည့်ဝသွားသည့်အခါ ရလာသည့်ပျော်ရွှင်မှုအချိန်ခဏတာနှင့် ယှဉ်၍မရပါ။
၂၀၁၈တွင် ကျွန်တော်တို့သည် စိတ်ကူးအိပ်မက်များ တကယ်ဖြစ်လာပြီ ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာအဝှမ်းရှိ လူ၁၂ယောက်အား သူတို့သည် ဖွင့်ပြောသင့်ပြီး၊ ဆန်းကြယ်မှုတွင်ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်သွားစေသည်။ ကလေးများ၏စာကြည့်တိုက်အား စာအုပ်အသစ်များဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းအစုံ ဝယ်ပေးခဲ့ခြင်း၊ အိပ်မက်ခရီးစဉ်လေး စီစဉ်ခြင်း၊ လူအများ၏ ဝါသနာကိုပံ့ပိုးသည့်အနေဖြင့် ပါဆယ်များ (ဒရုန်းနှင့် ကင်မရာများ) ပို့ပေးခြင်း နှင့် မျက်မှန်ဆိုင်လေးအတွက် ကြော်ငြာစာတမ်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ခြင်းများတောင်မှ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ဘဝကို ပိုကောင်းမွန်အောင်မပြောင်းလဲနိုင်ပါက ငွေသည်ဘာမှမဟုတ်ပါ။ မဒန် ဥပုသ်လ သည် သနားစုံမက်ခြင်းနှင့် အကူညီရှာနေကြသည့် သူများအတွက်စဉ်းစားရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ယခုလအတွင်း [နှစ်စဉ်ပရဟိတ ပရိုမိုးရှင်း] လေးသည် FBSအတွက် တကယ့်အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်မှုရခဲ့ကြသည်။ ကြေးအဟနှင့် IB ကော်မရှင်မှရသည့် $၃၁၀,၄၇၈အားလုံးအား လိုအပ်သူများကို ကူညီနေသည့် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း ၇ခုအကြား ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်]။
ကံမကောင်းစွာ၊ ဘဝတွေကို ဖျက်စီးပစ်သည့် မကောင်းသည့်အဖျက်အဆီးများသည် တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ဤတွင်လိုအပ်သည်မှာ ချက်ချင်း၊ ထိရောက်စွာတုန့်ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။ သြဂုတ်လကုန်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည့် လာအို ရေဘေး နှင့် Lombok ငလျှင်ဘေး သည် ကျွန်တော်တို့ကို ရင်ကျိုးစေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် လက်တွ့သမားအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အခြေခံလူမှုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးများနှင့်အတူ FBSအဖွဲ့များပါသည့် FBSထရပ်ကားများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ရေတိုမှာ ဘေးဒုက္ခသည်များ၏ဘဝကို ဖြေရှင်းပေးမည့်မျှော်လင့်ချက်ကြီးဖြင့် ဝေးလံခေါင်ဖျားသည့်ဒေသများသို့ ရောက်ခဲ့ကြသည်။
FBS အလုပ်ကြိုးစားပြီး၊ ပါတီပွဲများလည်းကျင်းပခဲ့ပါသည်! ဖေဖော်ဝါရီတွင် ကျွန်တော်တို့၏ [၉နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ကို Surabayaမှာ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို့နောက် သြဂုတ်လတွင် ကိုင်ရိုမြို့ရှိ မမေ့နိုင်ဖွယ် ရောင်းဝယ်သူများပါတီ ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ သင်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး၊ ပြည့်ဝတဲ့အချိန်ကို အတူတကွကုန်ဆုံးရခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့အား သစ်လွင်သောအကြံဥာဏ်များပေးပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကို ချဲ့ထွင်ချင်ပြီး၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနောက် လိုက်ချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ယခုနှစ်တွင် အာရေဗျဒေသ၏ လူကြိုက်အများဆုံးပွဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် [ကိုင်ရို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်စည်ပြပွဲ ၂၀၁၈] ပါဝင်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာပြပွဲ ၈ခု ကို တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဇွန် ၂၀၁၈တွင်၊ ကမ္ဘာ့ဖလား စိတ်လွတ်လက်လွတ်ပြုမူခြင်းများကျရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လက်လွတ်မခံခဲ့ဘဲ၊ FBS ဘောလုံးခရီးစဉ် ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ [၅၅ဦးသော ရောင်းဝယ်သူများသည် ရုရှားကိုလည်ပတ်ခွင့်ရခဲ့]ပြီး နိုင်ငံတကာပရိတ်သတ်အုပ်ကြီးထဲတွင် ရောပါခဲ့သည်။
ယခုနှစ်သည် အလွန်ဖြစ်ထွန်းသည့်နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့သည် - ကျွန်တော်တို့၏ အားစိုက်ထုတ်မှုများအား ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဈေးကွက်ခေါင်းဆောင်များမှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ [နိုင်ငံတကာ ဆုပေါင်း ၇ဆု]နှင့်အတူ၊ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ သေချာနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်။ FBSအား စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး၊ အရောင်းအဝယ်ပစ္စည်းများများစားစားနှင့် ထင်ရှားသည့် အကျိုးဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့၏ အလားအလာရှိသည့် FBS CopyTrade ဆော့ဖ်ဝဲကိုလည်း မဲပေးခဲ့ကြသည်။ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ စာရင်းများမှာ:
- UK ရှယ်ယာမဂ္ဂဇင်း၏ “Most Transparent Forex Broker - 2018” နှင့် “Best Forex Trading Account 2018”
- CFI.co, လန်ဒန်အခြေစိုက် ငွေကြေးမဂ္ဂဇင်း၏ “Best Copy Trading Application Global - 2018”]နှင့် “Best Forex Broker Asia-2018”
- Hexun၏ “Best Investor Education - 2017”
- တရုတ် Forex နည်းပညာဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက် ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် Y2 ဖိုရမ်၏ “Best FX IB Program - China 2017”
- FXEmpire၏ “Most Promising Broker – 2018”
ကျွန်တော်တို့ အကူညီပေးအဖွဲ့သည် နှစ်စဉ်ရလဒ်များတစ်လျှောက် တိုးတက်နေသည်။ မယုံနိုင်ဖွယ်အမြန်နှုန်း [တောင်းဆိုချက်တစ်ခုလျှင် စက္ကန့်၃၀နှင့် ကျေနပ်မှုရသည့်ဖောက်သည် ၉၅%]တို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှု သက်သေဖြစ်ပြီး၊ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု၏ အဆုံးမဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်များပါသည့် ဇယားအရေအတွက်များသည် မီလန်နေထိုင်သူများအရေအတွက်နှင့် တူညီသည်။ ၁,၄၀၆,၀၀၀ဖြစ်ပြီး၊ ပျမ်းမျှ တစ်နေ့လျှင် ၅,၀၀၀ စကားစမြည်ပြောဆိုမှုများကို တွေးကြည့်ပါ! ကျွန်တော်တို့အထူးပြုများမှ သင့်နေ့စဉ်အရောင်းအဝယ် လွယ်ကူ၊ အဆင်ပြေစေရန် တောင်းဆိုမှုပေါင်း ၂၄၀,၀၀၀ကို ဖြေရှင်းခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဟိုက်လိုက်များကို မျှဝေတာ ဒါပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အား ကျွန်တော်တို့အကြောင်း ပိုသိစေလိုပြီး၊ ဆက်သွယ်ပြီး၊ တုန့်ပြန်ချက်ထားစေချင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်သည် စွမ်းအားဖြစ်သည်! လူမှုမီဒီယာ လွှမ်းမိုးမှု ဘယ်လောက်ကြီးထွားလာလဲကြည့်ပါ။
ရုပ်လုံးပေါ်ထွက်လာမှုကို ကြီးမားစွာတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ [အင်စတာဂရမ် ဖော်လိုဝါ ၁၁၈%ထက်ပို] ရခဲ့ခြင်းအား ဝမ်းသာလျှက်ရှိသည်။ [Facebook အဖွဲ့အစည်း]သည်လည်း ကြီးထွားလျှက်ရှိသည်။ အတူတကွဆို ကျွန်တော်တို့သည် ၁,၁၉၉,၄၇၈ ရှိပါပြီ!
၂၀၁၈ တစ်နှစ်တာ၏ အထွဋ်အထိပ်မှကြိုဆိုပါတယ်! ဒီဇင်ဘာလတွင်၊ ကာလကြာရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည့် သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်စတင်လိုက်ပါပြီ။ ပထမဆုံး ၂၄နာရီအတွင်း ပါဝင်ဆင်နွှဲသူ ထောင်ကျော်ယူဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ အမိုက်စား လက်ဆောင်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပွဲများထုပ်ပိုးပြီး အစီအစဉ်မှ သင့်အရောင်းအဝယ်အတွေ့အကြုံထဲတွင် ပေါင်းထည့်ပေးထားပါသည်။ [နောက်နှစ်အတွက် သင့်ရည်မှန်းချက်ကို မဆုံးဖြတ်ရသေးပါက၊ Mercedes Benz S-Class (သို့) Rolex နာရီသည် သင့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်]။
တစ်နှစ်တာလုံး ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူရှိသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
ကျွန်တော်တို့၏ ကြီးထွားမှုသည့် မျှဝေခဲ့သည့်အောင်ပွဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၉အတွက် ကျွန်တော်တို့၏ အဓိက ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အတူနေပြီး၊ အလွန်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်ဖို့ပါပဲ!